dilated ပေါက်တင်းကျပ်ဖို့ 8 အကြံဉာဏ်ကို - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - dilated ပေါက်တင်းကျပ်ဖို့ "8 အကွံဉာဏျ
သင့်ရဲ့ကနျြးမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - dilated ပေါက်တင်းကျပ်ဖို့ 8 အကွံဉာဏျ
Tele RELAY တစ်ခု 29 စက်တင်ဘာလ 2019
ဗေဒအကြောင်းပြချက်နှင့် Self-လေးစားမှုအဘို့, လူအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့အရေပြား၏အပေါက်တင်းကျပ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြ၏။ ယေဘုယျအထဲတွင်ကအန္တရာယ်ကင်းပြဿနာရဲ့ဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းဆိကြည်ဂလင်းများနှင့်ဟော်မုန်းပြောင်းလဲအတွက်မညီမညာဖြစ်နေသောညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ဟာမကြာခဏနဖူး, နှာခေါင်းနှင့်မေးစေ့သောမျက်နှာ, ၏ "T က" ၌တှေ့ရှိနေကြသည်။ သို့သော်သူတို့ကပါးနဲ့အရေပြားနဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းသိသာဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကရလဒ်ဝက်ခြံဝက်ခြံနှင့်အ blackheads ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ sebum အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်အဖြစ်အပြင်, သူတို့လုပ် တောက်ပအသားအရေ နှင့်လျစ်လျူရှု။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အအသားအရေဟာလတ်ဆတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအသွင်အပြင်ပေးရ minimize နိုငျကွောငျးအများအပြားအကြံပြုချက်များနှင့်ကုစားရှိပါတယ်။ သငျသညျသူနှောင့်အယှက်ဤပြဿနာ?
1 ။ စေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်
dilated ပေါက်တင်းကျပ်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းသင့်လျော်သောထုတ်ကုန်နဲ့နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်မှာထိုမျက်နှာအသားအရေကိုပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကတခြားဒေသများထက်နှင့်၎င်း၏သော pH အပြောင်းအလဲမကုသလိုအပ်သည်။
ဤပြဿနာကိုရှောင်ရှားရန်, ကဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေအမျိုးအစားအရသိရသည်ဆပ်ပြာနှင့်လိမ်းရွေးချယ်ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်။
ဒါ့အပြင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ: တစ်ဦးတောက်ပသောမျက်နှာအဘို့အ5သဘာဝကမျက်နှာမျက်နှာဖုံးများ
2 ။ exfoliating ထုတ်ကုန်ကိုသုံးပါ
exfoliating ထုတ်ကုန်များ၏ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းကိုဖွင့်အပေါက်ကိုသာသက်ရောက်သောပိုလျှံအဆီဆန့်ကျင်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဖန်နှင့် detoxifying ဂုဏ်သတ္တိများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်, သူတို့ဖွဲ့စည်းကြောင်းအကြွင်းအကျန်ဖယ်ရှားပစ်ရန်စံပြများမှာ blackheads.
သငျသညျဆေးဆိုင်များနှင့်အလှကုန်စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချရှိသူများကိုသုံးနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း, ကသဘာဝမြားကိုအသုံးပွုဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့2ကြိမ်တစ်ပတ်လျှင်ကြောင်းလျှောက်ထားရပါမည်ဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးဆုံးအရာ။ ပိုလျှံအတွက်, သူတို့ cons-တန်ဖိုးရှိရှိနိုင်ပါတယ်။
3 ။ သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုမျက်နှာလုပ်သူများ Include
မျက်နှာဆိုးဆေး၏ Daily သတင်းစာလျှောက်လွှာအပေါက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုခလုတ်ပိတ်ဖို့ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ဒီကုသမှုအရေပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ဆက်ပြီးအမဲဆီဖယ်ရှားပေးနှင့် pH ကိုထိန်းညှိ။
ထို့အပွငျကုမ္ပဏီများနဲ့ anti-inflammatory တ္ထုများဟာသူတို့ရဲ့ content တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါက sagging နှင့်အချိန်မတန်မီအိုမင်းလက္ခဏာကိုရှောင်ကြဉ်ရန်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ အာဟာရသူတို့ရဲ့စားသုံးမှုအတွက်ကူညီပေးရန် ပွနျလညျ ဆဲလ်နှင့်အနာအနာရောဂါငြိမ်းစရာပါ။
4 ။ ချွေးပေါက်တင်းကျပ်ရန်ရေခဲ Cube ကိုသုံးပါ
ရေခဲကုထုံး၏စျေးကြီးကုသမှုထဲမှာပိုက်ဆံအများကြီးဖြုန်းခြင်းမရှိဘဲအပေါက်တင်းကျပ်ဖို့အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုတခုဖြစ်ပါတယ်။ အေးအရွယ်အစားလျှော့ချကူညီပေးသည်နှင့် flaccid နှင့်အရေးအကြောင်းတွေလျော့နည်းစေမယ့် "tensor" အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးထားပါတယ်။
သူတို့မှာလည်းအဆီလျှော့ချသောကွောငျ့တကယ်တော့သက်ရောက်မှုအချို့သမားရိုးကျလုပ်သူများ၏သူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ကျနော်တို့သူတို့ပြင်းထန်တဲ့ကြောင့်အထည်ပတ်ရစ်, ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုအသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။
5 ။ အစာအာဟာရကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
မျက်နှာကုသမှုကျရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်ကအကောင်းစားအလေ့အထရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထို့ကြောင့်, လျှင်ရည်မှန်းချက်ပေါက်တင်းကျပ်ခြင်းနှင့်အသားအရေအသွင်အပြင်တိုးတက်လာဖို့ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်အစားအသောက်များတွင်တချို့ပြင်ဆင်ချက်စေရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
အဲဒီအစား, ကပိန်အသား, တပြင်လုံးကိုအစေ့များနှင့်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအာရုံစိုက်သင့်တယ်
6 ။ ရေသုံးစွဲမှုကိုတိုးပှား
အဆိုပါရေခန်းခြောက်အသားအရေမှိုင်းပြီးခြောက်သွေ့ကြည့်ပေမယ့်, အနိမ့်ရေသုံးစွဲမှုလည်းအဆီပြန်အသားအရေသို့မဟုတ်ပွင့်လင်းပေါက် aggravates ။ ဤသည်အရေးပါသောအအရည် sebum ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆဲလ်အသေများဖျက်သိမ်းရေးကိုထိန်းညှိအတွက်သော့ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်။
7 ။ ပျားရည် Apply
ပျားရည်ရှိပါတယ် အလှကုန် applications များ အရာခေါင်းပုံဖြတ်ခံရဖို့ထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ ယင်း၏အင်ဇိုင်းအကြောင်းအရာကျေးဇူးတင်ပါသည်ဒြပ်စင်များနှင့် antioxidants ခြေရာကောက်ဖြစ်ပါသည် ထိုလုလင်သည်မကျြနှာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အညစ်အကြေးမရှိဘဲဖို့အကောင်းဆုံးသဘာဝအထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်း။
ဒီအထူးသဖြင့်အမှုမှာ, blackheads ကာကွယ်တားဆီးဖို့အရေပြားရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေဆဲလ်အသေဖယ်ရှားပေးနှင့်အပေါက်တင်းကြပ်
ကပွနျလညျအားပေးအားမြှောက်ခြင်းနှင့်အပူလောင် soothes ကြောင့်လည်းနေရောင်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကျူးကျော်ဆန့်ကျင်အသုံးဝင်သည်
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အရေးအကြောင်းတွေကာကွယ်တားဆီးဖို့5အခြေစိုက်မျက်နှာဖုံးများအနေနဲ့ရှားစောင်းလက်ပတ်
8 ။ ချွေးပေါက်တင်းကျပ်ဖို့မျက်နှာဖုံးများ Apply
အဆိုပါအိမ်လုပ်မျက်နှာဖုံးများ sebum အကြွင်းအကျန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အပေါက်ပိတ်ဖို့ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအဖြည့်ဖြစ်ကြ၏။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ကြောင့်ညာဘက်ချက်ပြုတ်နည်းများရွေးချယ်ရမယ် ဖက်တီးဒြပ်ပေါင်းများပါဝင်သူတွေကိုအလွန်အသုံးဝင်မရှိကြပေ။
ပြဿနာကချွေးပေါက်, ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ဝက်ခြံ၏အဖွင့်တွင်ထင်ဟပ်သည်ဆိုပါကပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့သောသူတို့သည်ရှေးခယျြဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် ဖန် နှင့်သန့်ရှင်းရေး။ တချို့ကစိတ်ဝင်စားဖို့ရွေးချယ်စရာနေသောခေါင်းစဉ်:
ကြက်ဥအ White က
သင်မကြာခဏကြီးမားတဲ့အပေါက်ရှိသည်? ဒါကြောင့်ဤအကြံပြုချက်များအတိုင်းလိုက်နာ။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, သူတို့ဖြစ်ကြသည် အလွန်လွယ်ကူက c သက်သာရာအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ရှိသည်ette ပေးအပ်။ သင်တစ်ဦးချောမွေ့ခြင်းနှင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းအသားအရေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယခုအကောင့်သို့သူတို့ကိုငါယူပါ။
သင့်ရဲ့အသားအရေကို clean လုပ်ဖို့5အကြံပေးချက်များ
သင့်ရဲ့အသားအရေကို clean လုပ်ဖို့ကြောင့်ရေနှင့်ဆပ်ပြာကိုသုံးပါရန်လုံလောက်သည်မဟုတ်။ တစ်ဦးရဲအသားအရေရှိသည်ဖို့ကောင်းသောအလေ့အထများကိုချမှတ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ! Read more »
4 ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုခြေပျော့ပြောင်းမှရေချိုး - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
"အဝါရောင်လက်သည်း" ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖယ်ရှားပစ်ရအိမ်တော်သို့ဖြေရှင်းချက် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
SNAPCHAT ON GIRL ၏မိခင်စော်ကားမှု - ဗီဒီယို